Ndifuna ukongeza iMiyalelo kwiTwitch ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndifuna ukongeza imiyalelo kwiTwitch
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 266
Ndifuna ukongeza imiyalelo kwiTwitch.
Amaxesha amaninzi singena kwezinye Ijelo leTwitch kunye Sibona inani elikhulu lee-icon kunye namagama kwizikrini zemijelo yokuhambisa esirhumele kuyo, uninzi lwamaxesha la magama kunye neesimboli azenzi ngqondo kuthi kwaye le yinto abanokuthi bayenze kwiimodareyitha nakwimisinga kwiziteshi zabo.
Le yimiyalelo, kwaye banoxanduva lokunika imiyalelo kwinkqubo ukuba yenze iintshukumo ezithile ngexesha lothumelo. Le miyalelo iqulunqwe njengoko besikuxelele ngaphambili, iimodareyitha okanye ii-streamer, ukuze zikwazi ukulawula izinto ezithile zothumelo.
Ngale nto unako lawula imisebenzi yejelo lakho kunye nonxibelelwano onalo nabalandeli bakho ngexesha losasazo ngqo.
Uya kuba nakho ukunxibelelana namanye amajelo kunye nabadlali.
Ziyi- Oovimba abaluleke kakhulu kwiimodareyitha xa zisenza usasazo kwaye yonke into ihamba ngeyona ndlela ingcono kwincoko nakwabalandeli.
Unako kwakhona yenza imiyalelo ethile ukuba neziganeko ezizodwa zibhengezwe wena.
Kukho iintlobo ngeentlobo zemiyalelo esele imiselwe ngaphambili liqonga kwaye zisetyenziselwa iimeko ezithile, apha ngezantsi, siza kudwelisa ukuba ziyintoni kwaye ngubani onokuziphatha. Gcina ukhumbula ukuba ngamnye wale miyalelo uza kubonakaliswa ngolu hlobo lulandelayo: / igama lomyalelo, kwaye nantsi indlela emiswe ngayo.
Imiyalelo esisiseko yabo bonke abasebenzisi: ezi ziyafumaneka kubo bonke abasebenzisi beqonga:
Imiyalelo esisiseko yokusasaza kunye neemodareyitha:
Imiyalelo yokusetyenziswa okukodwa kosasazo bejelo losasazo / abahleli:
Imiyalelo yokusetyenziswa okukodwa kwezihluzi:
Ngaphandle kwemiyalelo eboniswe ngaphambili kwaye efumaneka kwifayile ye- okungagqibekanga kwiqonga leTwitch, kukho uthotho lwemiyalelo onokuthi uyenze ngendlela eyeyakho.
Indlela yokwenza ngolu hlobo lulandelayo:
Kuya kufuneka ufake icandelo elichongiweyo njenge "Imiyalelo", Emva kwexesha kufuneka ukhethe ukhetho "Uluhlu lweeMiyalelo".
Iwindow entsha iya kuvula apho ungangenisa khona umyalelo wokhetho lwakho, lo myalelo uya kubhalwa kwicandelo oya kukunika lona kule nkqubo. Emva koko cinezela ukhetho "Yenza".
Oku kuyakuvula iwindow pop-up entsha apho kuya kufuneka ubhale uphononongo olufutshane oluchaza umsebenzi womyalelo owenziwe nguwe, kwesi sicatshulwa kuyacetyiswa ukuba unike umyalelo igama. Cinezela "Gcina".
Ukuba ufuna ukwenza imiyalelo emitsha, unokuzixhasa nakwiiplatifti zomntu wesithathu, phakathi kwazo esinokucebisa ukuba:
Ukusasazwa: Ngale nto uya kuba nakho ukulawula yonke into eyenzekayo xa usasaza, ukwenza eyakho imiyalelo yokulawula ngokufanelekileyo incoko kunye nazo zonke izinto ezinxulumene nothumelo kunye nejelo lakho.
I-Nigttbot: Ijolise kwiimodareyitha kwaye yenza ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokufanayo nangaphambili.
Imootbot: umiselwe ukwenziwa kwemiyalelo oya kuba nakho ukuyisebenzisa bukhoma.
1 Ndifuna ukongeza imiyalelo kwiTwitch.
1.2 Iindidi zolawulo:
1.3 Imiyalelo esisiseko yokusasaza kunye neemodareyitha:
1.4 Imiyalelo yokusetyenziswa okukodwa kosasazo bejelo losasazo / abahleli:
1.5 Imiyalelo yokusetyenziswa okukodwa kwezihluzi:
1.6 Indlela yokwenza ngolu hlobo lulandelayo:
1.7 Amaqonga enkxaso:
Ungazikhuphela njani iividiyo kwi-YouTube SS?
Uzibona njani iinkcukacha manani kwi-Instagram?